ဒံယလေက | | သတိ
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းများအောင်မြင်ရန်ရည်ရွယ်သည် သတိသမ္ဗောဇ္ဈင်တည်း၊။ ၎င်းတို့သည်အနားယူခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်ခြင်းနှင့်စီးဆင်းမှုသို့ရောက်ရှိခြင်းအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ဒီနည်းပညာတွေကလူကြီးတွေရောကလေးတွေကိုပါအစေခံနိုင်တယ်။
2 လေ့ကျင့်ခန်း ၁ - သတိတစ်မိနစ်သို့မဟုတ်သတိတစ်မိနစ်။
3 လေ့ကျင့်ခန်း ၂: သတိရှိရှိလေ့လာခြင်း
4 လေ့ကျင့်ခန်း ၃ - ၁၀ စက္ကန့်ကိုရေတွက်ပါ
5 လေ့ကျင့်ခန်း 4: အာရုံစူးစိုက်မှုအချက်ပြ
6 လေ့ကျင့်ခန်း ၅: သတိရှိရှိအသက်ရှူခြင်း
7 လေ့ကျင့်ခန်း (၆) - နေ့စဉ်လုပ်နေကျလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကိုသတိထားပါ
သတိသို့မဟုတ်သတိ ဒါကပစ္စုပ္ပန်အခိုက်၏အသိအမြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာဒီမှာနေတယ် ပစ္စုပ္ပန်ယခုအချိန်တွင်သတိမှတဆင့်, သင်အတိတ်ကာလ၌ဖမ်းမိရနှင့်အနာဂတ်စိုးရိမ်ပူပန်ရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုဆက်ပြီးထိတွေ့နေသလဲ "ဒီမှာနဲ့အခု" သင့်စိတ်သည်တစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့လှည့်လည်သွားလျှင်? အဖြေမှာ "အာရုံစူးစိုက်မှုအပြည့်"။ ဤသို့သောအာရုံစူးစိုက်မှုမျိုးရရှိရန်ခက်ခဲသော်လည်း၎င်းအတွက်ဖြစ်သည် ကျနော်တို့အချို့လေ့ကျင့်ခန်းဖော်ထုတ်သွားနေကြသည် သင်နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ပါကသင်အောင်မြင်နိုင်သည်။
[ဤဆောင်းပါး၏အဆုံးတွင်သင့်အားစပိန်ရုပ်မြင်သံကြား၏စိတ် ၀ င်စားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ချန်ထားပါ]
လေ့ကျင့်ခန်း ၁ - သတိတစ်မိနစ်သို့မဟုတ်သတိတစ်မိနစ်။
ဒီအထဲကကြိုးစားရန်အခုအချိန်မှာခဏယူပါ။ 1 မိနစ်အတိအကျမှအသံနှိုးဆွပါ။ လာမည့်စက္ကန့် ၆၀ တွင်သင်၏အလုပ်မှာဖြစ်သည် သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုအားလုံးကိုအသက်ရှုခြင်းအပေါ်အာရုံစိုက်ပါ။ တစ်မိနစ်မျှသာ🙂သင်၏မျက်လုံးများကိုဖွင့ ်၍ ပုံမှန်အသက်ရှူပါ။ အကယ်၍ သင်၏စိတ်သည်အကြိမ်များစွာအာရုံလွဲသွားလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းအရေးမကြီးပါ၊
ဤသည်သတိသည်လေ့ကျင့်ခန်းသည်သင်စိတ်ကူးနိုင်သည်ထက်ပိုမိုအစွမ်းထက်သည်။ သင်မတတ်နိုင်မီနှစ်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရသည် သတိတစ်ခုတည်းမိနစ်ဖြည့်စွက်။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုတစ်နေ့တာအတွင်းအကြိမ်ကြိမ်လေ့ကျင့်နိုင်သည် ပစ္စုပ္ပန်အခိုက်အဘို့သင့်စိတ်ကို restore ငြိမ်သက်ခြင်းအချို့ကိုပေးပါမည်။
လေ့ကျင့်ခန်း ၂: သတိရှိရှိလေ့လာခြင်း
သင်ဝန်းကျင်ရှိအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုကောက်ယူပါ။ ၎င်းသည်ကော်ဖီတစ်ခွက်သို့မဟုတ်ခဲတံတစ်မျိုးဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုသင်၏လက်၌ထားပါ။ အရာဝတ္ထုမှသင့်အာရုံကိုအပြည့်အဝစုပ်ယူနိုင်အောင်ခွင့်ပြုပါ။ ကြည့်ရုံပါပဲ။
သင်ရောက်ရှိနေခြင်း၏သာ။ ကြီးမြတ်ခံစားချက်သတိထားမိပါလိမ့်မယ် "ဒီမှာနဲ့အခု" ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကာလအတွင်း။ သငျသညျအဖြစ်မှန်နှင့်ပတ်သက်။ ပိုပြီးသတိထားမိဖြစ်လာသည်။ သင်၏စိတ်သည်အတိတ်သို့မဟုတ်အနာဂတ်၏အတွေးများကိုမည်မျှလျင်မြန်စွာလွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်းနှင့်ယခုအချိန်တွင်အလွန်သတိရှိရှိဖြင့်မည်သို့မည်ပုံကွဲပြားနေသည်ကိုသတိပြုပါ။
သတိရှိရှိလေ့လာခြင်းသည်တရားအားထုတ်ခြင်းပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဒါဟာသိမ်မွေ့ပေမယ့်အစွမ်းထက်သည်။ ကြိုးစားကြည့်ပါ။
လေ့ကျင့်ခန်း ၃ - ၁၀ စက္ကန့်ကိုရေတွက်ပါ
ဤလေ့ကျင့်ခန်းသည်လေ့ကျင့်ခန်း ၁ ၏ရိုးရှင်းသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့အသက်ရှူမှုကိုအာရုံစိုက်မယ့်အစားသင်၏မျက်စိကိုပိတ်ပြီးတစ်ဆယ်ကိုရေတွက်ခြင်းကိုသာအာရုံစိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုပျံ့လေ့လျှင်, နံပါတ်တစ်မှာစတင်ပါ။ ဒီတစ်ခါလည်းဒီလိုဖြစ်မယ်
“ တစ်၊ နှစ်၊ သုံး…ငါဟွမ်နဲ့တွေ့ရင်ငါဘာပြောမလဲ။ အိုဘုရားသခင်၊
“ တစ်၊ နှစ်၊ သုံး…လေး…ဒီဟာကသိပ်မခက်ဘူး…အိုးမဟုတ်ဘူး…။ ဒါကအတွေးပဲ!
«တစ်ခု၊ နှစ်၊ သုံး…ယခုငါရပြီ။ အခုငါအရမ်းအာရုံစိုက်နေပြီ၊ ဘုရားသခင်၊
လေ့ကျင့်ခန်း 4: အာရုံစူးစိုက်မှုအချက်ပြ
သတ်မှတ်ထားသောအချက်ပြမှုတစ်ခုချင်းစီတိုင်းတွင်သင်၏အာရုံကိုအာရုံစူးစိုက်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဖုန်းမြည်ချိန်တိုင်းသည်လက်ရှိအခိုက်အတန့်သို့လျင်မြန်စွာအာရုံစိုက်ပြီးသင်၏အသက်ရှုခြင်းကိုအာရုံစိုက်ပါ။
သင့်အတွက်သင့်တော်သောအချက်ပြကိုသာရွေးချယ်ပါ။ သင်မှန်၌ကြည့်ရှုသည့်အခါတိုင်းအပြည့်အဝသတိထားမိရန်သင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်သင်၏လက်များသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ထိတွေ့တိုင်းအချိန်တိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်လော။ သင်သည်ငှက်၏သီချင်းကိုသင်၏အချက်ပြမှုအဖြစ်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
လေ့ကျင့်ခန်း ၅: သတိရှိရှိအသက်ရှူခြင်း
ဤလေ့ကျင့်ခန်းကိုမတ်တပ်ရပ်ခြင်း၊ ထိုင်ခြင်းနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအချိန်မရွေးလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ မင်းလုပ်ရမယ့်အရာကငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ပြီးတစ်မိနစ်လောက်အသက်ရှူဖို့အာရုံစိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
တဖြည်းဖြည်းရှူရှိုက်မိခြင်းနှင့် exhaling အားဖြင့်စတင်ပါ။ သံသရာတစ်ခုသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၆ စက္ကန့်ခန့်ကြာသည်။ သင့်ရဲ့နှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ထဲကနေထွက်သက်ဝင်သက်ရှူပါစေ။
သင်၏အကြံအစည်များကိုတစ်မိနစ်ခန့်ထားပါ။ နောက်မှသင်လုပ်ရမည့်အရာများကိုဘေးဖယ်ထားပါ။ သင်၏အသက်ရှူမှုကိုတစ်မိနစ်သာအာရုံစိုက်ပါ။
ဒီမိနစ်ပိုင်းစိတ်အေးဆေးမှုကိုသင်ခံစားခဲ့ရလျှင်၊ ၎င်းကိုနှစ်မိနစ်၊ သုံးမိနစ်အထိတိုး။ တိုးမြှင့်ပါ။
လေ့ကျင့်ခန်း (၆) - နေ့စဉ်လုပ်နေကျလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကိုသတိထားပါ
သင်နေ့စဉ်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးလုပ်သောအရာကိုစဉ်းစားပါ။ ဥပမာ - တံခါးဖွင့်တာလိုပေါ့။ တံခါးကိုဖွင့်ရန်အတွက်သင်အဖုသို့မဟုတ်လက်ကိုင်ကိုတို့ထိသည့်အချိန်တွင်ထိုအခိုက်အတန့်၏ခံစားချက်များကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းခံစားရသည်။ အဖု၏နွေးထွေးမှု၊ သင်မည်သို့လည်ပတ်သည်၊ နူးညံ့မှု၊
ဒီလိုသတိမျိုးဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရဖြစ်ဖို့မလိုပါဘူး။ ဥပမာ - မကောင်းသောအတွေးတစ်ခုကိုသင်ဖန်တီးတိုင်းခေတ္တရပ်တန့်ရန်၊ အတွေးကိုအချည်းနှီးဟုမှတ်ယူပြီးအနုတ်လက္ခဏာဆောင်ကိုထုတ်လွှတ်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်အစာမွှေးတဲ့အချိန်တိုင်း၊ ထိုအနံ့ကိုသတိပြုမိပြီးသင်၏မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူစားရန်၊ ကောင်းသောအစားအစာရှိရန်မည်မျှကံကောင်းသည်ကိုတန်ဖိုးထားပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု » သတိ »6သတိလေ့ကျင့်ခန်းသို့မဟုတ်သတိ
နာဇရက် ပီရက်ဇ် ဂူတီယာရက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
အရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ hahahaha အလွန်သတင်းအချက်အလက်များကိုထည့်ပါ
Nazaret Perez Gutierrez အားပြန်ပြောပါ
မေလ C Losada ဟုသူကပြောသည်
မေလ Losada မှတုံ့ပြန်ပါ
Lara De Arce Maribel ဟုသူကပြောသည်
Lara De Arce Maribel အားစာပြန်ပါ
Alicia Del Carmen Iturbe ဟုသူကပြောသည်
ဤအချက်သည်မှန်ပါသည်၊ အလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ကောင်းစွာလုပ်သည်။ အလွန်ကောင်းသည်။
Alicia Del Carmen Iturbe အားစာပြန်ပါ
Tano Calabresse ဟုသူကပြောသည်
Tano Calabresse အားပြန်ပြောပါ
Toñi Rodriguez Sanchez ဟုသူကပြောသည်
ဤပြcrisisနာသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဖြစ်ပေါ်စေသောပြproblemsနာများကိုရင်ဆိုင်ရန်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောနည်းစနစ်တစ်ခုဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်ပါသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမကောင်းသောအဖြစ်အပျက်များကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်နှင့်လက်ရှိအခိုက်အတန့်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သက်တောင့်သက်သာနှင့်ကြိုဆိုသည့်တေးဂီတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းချက်ကိုခံစားရန်။
Toñi Rodriguez Sanchez သို့ပြန်သွားပါ
အော်စကာ Gonzalez ဟုသူကပြောသည်
Oscar Gonzalez အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုမလွယ်ကူပါ၊ သို့သော်ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်အလွန်စိတ် ၀ င်စားပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သတိလစ်နေခြင်း၌အမြဲတမ်းနေထိုင်နေရကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်ရှုပ်ထွေးသောရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်စိတ်ဒဏ်ရာများကြောင့်ကျွန်ုပ်ဘ ၀ ကိုမနေထိုင်နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်နေထိုင်သည်မှာသေချာသည်။ အပြည့်အဝသတိသည်အေးဆေးတည်ငြိမ်အေးဆေးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
maritza fuentes jaimes ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ လေ့ကျင့်ခန်းများသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုပါ ၀ င်သည့်စာရွက်စာတမ်းများကိုကျွန်ုပ်ထံပို့ပေးပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှုကိုတင်ပြသောကလေးများနှင့်စတင်ရန်ကျွန်ုပ်အလွန်စိတ်ဝင်စားသောနည်းလမ်း၏လှုပ်ရှားမှုပါ ၀ င်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အလုပ်ခွင်တွင်းကုထုံးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တက်ရောက်လေ့ရှိသည့်အများစုမှာဆေးများဖြစ်ပါသည်။
ငါ့သား Freymar မှာလည်းရောဂါရှိတယ်။ သူတို့ကသူ့ကိုဆေးသောက်တော့မယ်။ ငါမလုပ်ရင်သူတို့ကငါ့ကိုကျောင်းကပေးတယ်။
maritza fuentes jaimes အားပြန်လည်ပြောဆိုပါ
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း၊ ရိုးရှင်းပြီးလက်တွေ့ကျင့်သုံးရန်အလွန်လွယ်ကူသောဥပမာများအတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်အာရုံ၏။ ငါအရမ်းပီတိအံ့သြသွားတယ်။ သင်၏မျက်လုံးများပိတ်ပြီးနားမထောင်ရန်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့် ပို၍ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သည့်အခါသင် ပို၍ အာရုံစိုက်နေကြောင်းအမြဲတမ်းယုံကြည်သည်။ သင်၏ပံ့ပိုးမှုများအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဆက်လုပ်ပါ။ စပိန်နိုင်ငံမှနှုတ်ခွန်းဆက်သသည်။
efétidoဆိုသောနေရာသည်ငွေသားဖြစ်သည်။ ဝှက်၏လှည့်ကွက်။ wow, ငါအဲဒီမှာအပြည့်အဝအာရုံစူးစိုက်မှုကိုမ didn't
Blanca Rosa Trasviña Aguilar ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးငါလေ့ကျင့်ရန်လွယ်ကူသည်၊ သင့်အာရုံကိုသာအာရုံထားပါ၊ သင်လေ့ကျင့်ရန်လိုသည်
Blanca Rosa Trasviña Aguilar ထံပြန်သွားပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!! သင်တတ်နိုင်သည်ကိုသိရခြင်းသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းပြီး ...
ငါအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်၊ ငါလေ့ကျင့်မယ်။ ငါ့မှာအတွေးပေါင်းတစ်သန်းရှိတယ်
Ludy Moreno ဟုသူကပြောသည်
LUDY MORENO ကိုစာပြန်ပါ
ဒီအကြံပြုချက် (၁၀) ခုနဲ့သင့်သဘောထားကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲ